आलुले फेरिएको लिखु गाउँपालिका « News of Nepal
आलुले फेरिएको लिखु गाउँपालिका
० सुनील महर्जन
युवावर्गको वैदेशिक रोजगारीसंगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढीरहेको छ ।यस्तो अवस्थामा नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा २ सय ४० रोपनी जग्गामा आलु खेती थालनी गरिएको छ ।
सो कार्य धेरै देशको भ्रमणपछि स्वेदशमै केही गर्नुपर्दछ भन्ने अञ्जु शाहको भावनाका उपज हुन् । उनीसहित चार जना मिलेर गाउँपालिका–४ स्थित चौघडामा जग्गा लिजमा लिएर आलु खेतीको शुरुआत गरिएको हो ।
यही नै जिल्लाकै ठँलो अर्गानिक कृषि फार्म रहेको वडा नं ४ का दलबहादुर राईले बताउनुभयो । यस कार्यका लागि वडाको नाउँमा ५४ रोपनी ७ आना जग्गा पनि लिजमा दिइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।‘जनप्रतिनिधि आएपछि अहिलेसम्मकै ठँलो कार्य नै यही हो ।’ राईले भन्नुभयो । तर राणाकालदेखि जोत्दै आएका गरिब किसानहरुलाई हठात हटाइएकोमा यसमा केही वडा सदस्यको समेत असन्तुष्टि पनि नभएको होइन ।
चौघडा एग्रो अर्गानिक प्रा.लिको नाउँमा शाहको समँहले आलुखेतीका लागि प्रति रोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने सहमतिमा १० वर्षका लागि जग्गा लिज छन् । यस कार्यमा उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको सहयोग रहेको छ । अहिलेसम्म एक करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।
नुवाकोटकै अहिलेसम्मकै ठूलो अर्गानिक कृषि फार्म सञ्चालन
यही वर्षभित्र पशुचौपाय एवं पक्षी पालनसमेत शुरु गरी तीन करोड पु¥याउने लक्ष्य लिएको पनि प्रा. लिका अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो ।‘यहाँको माटो खुकुलो छ ।उर्बर भँमी रहेको छ ।त्यसैले आलु खेती मार्फत कृषिको यान्त्रिकरण गर्ने जोखिम उठाएका हौं ।’ प्रा. लि प्रबन्ध निर्देशक सनोज महतले भन्नुभयो ।
फार्ममा हाल १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । फार्ममा हाल बीउ उत्पादनको लागि आलु पनि रोपिएको छ । बेमौसमी तरकारी खेती, बीउ उत्पादनको लागि धानखेती गने पनि बताइएको छ ।
प्राङारिक मल र दँध उत्पादनको लागि १ सय गाईपालनको लागि गोठ निर्माण थालिएको छ । मासु उत्पादनको लागि १ सय बाख्रा र स्थानीय जातका दुई हजार कुखुरासमेत पालन गर्न खोर बनाउने पनि प्रा.लिको योजना रहेको छ ।
‘यस कार्यले कृषि पेशा प्रतिष्ठित बनाएको छ।’खेतीको शुरुआत गर्दै जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले भन्नुभयो ‘जिल्लाकै ठँलो कृषि क्षेत्रको शुरुआतले अन्य किसानलाई पनि व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।’
समथर र उर्वर भूमि, गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ को केही भँभाग , वडा नं. ४, र वडा नं. ५ मा अन्य वडाको तुलनामा समथर र उर्वर भँमि रहेको छ । यहाँका कृषक सामुहिक अर्गानिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुने बढ्दो छ ।
जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आलुको जोन कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै आलुखेती गर्ने किसानको संख्यामा वृद्धि र लगाउने क्षेत्रफल समेत बढ्न थालेको छ ।त्यसमध्ये लिखु गाउँपालिका अन्य स्थानको तुलनामा आलु खेतीको लागि बढी उपर्युक्त रहेको छ ।साविकको खानिगाँउ गविसको सबै वडा, सुर्यमति गाविसको सबै वडा, चौघडा गाविसको १, २, ५, ६, ७, ८ वडाहरु, थानसिंङ गाविसको १, २, ३, ४, ५, ६, ७ वडाहरु र थानापति गाविसको वडा नं ५ समेटेर जम्मा ६ वडा बनाई लिखु गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो ।
समथर र उर्वर भँमि, गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ को केही भँभाग , वडा नं. ४, र वडा नं. ५ मा अन्य वडाको तुलनामा समथर र उर्वर भँमि रहेको छ । यहाँका कृषक सामुहिक अग्र्यानिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुने बढ्दो छ ।
नुवाकोटमा यस वर्ष एक अर्ब ११ करोड मँल्य बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । बर्खे र हिउँदे दुई याममा उत्पादित ७४ हजार २०४ मेट्रिक टन आलु बिक्री गरेर जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । व्यावसायिक रुपमा चार हजार २ सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको छ । केन्द्रका अनुसार प्रतिहेक्टर १७ दशमलव ४७ मेट्रिक टन उत्पादन भई जिल्लाभर कँल ७४ हजार २०४ मेट्रिक ट्रन आलु उत्पादन भएको थियो ।
नुवाकोटमा आलु र तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्न चालँ आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तरकारी उत्पादनमा दुई करोड ५१ लाख ८६ हजार र आलु उत्पादनमा दुई करोड ५१ लाख बजेट रहेको विभाजन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्र्तगत आलु तथा तरकारी जोन नुवाकोटका प्रमुख डा. कमलराज गैरेले आलुको लागि बीउ बिजन, प्राविधिक सहयोग, यन्त्रहरु सहयोग गरिएको बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्षको भन्दा आलु लगाउने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएको छ । किसानले व्यावसायिक रुपमा शुरु गरेको खेती प्रणालीले आलुको उत्पादन अझ बढ्ने छ ।’ प्रमुख डा. गैरले जानकारी दिनुभयो । मलखादको सहज आपँर्ति र सुहाउँदो हावापानीले पनि उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । सो जिल्लामा आलुखेतीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना अनुरुप कृषकलाई सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । ‘अग्र्यानिक गाउँपालिका बनाउन कृषकसँग छफलका साथै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकामा भएकोले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिंचाई सुविधाको लागि सिंचाई कुलो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकोपनि गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
आलु पकेट क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिका अघि बढेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । अहिलेसम्म हामी परम्परागत रुपमै खेती गर्दै आएका छौ’, उहाँले भन्नुभयो ‘कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन, त्यसैले गाउँपालिकाले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।’
कृषि खेतीलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विस्तारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने पँर्वाधारहरु सिंचाई, शितगृह, संकलन गृह र कृषि सञ्जालीकरणको व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउने नीति अघि सारेको पनि गाउँपालिकाका उपप्रमुख रोजिना राईको कथन रहेको छ ।
सत्य किंवदन्तीका भीमेश्वर
रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा सबैभन्दा बढी फोन
किताब लुकाएर पनि फुटबल खेलेँ
सरकार असफलताको दोष लोकतन्त्रलाई दिन मिल्दैन
प्रविधिको प्रयोगले विपद् बाट बच्न सकिन्छ
नेकपामा कार्यविभाजन, ३० बढीले पाए नयाँ जिम्मेवारी (नामावलीसहित)
रविको बयान लिइँदै, बहस सकिए छुट्ने..
पत्रकार दबूको काठमाडौं अध्यक्षमा अरविनमान सिं
रवि र युवराजको बयान सकियो, थुनछेकको बहस सुरु
प्रगतिशील पत्रकार संघको निर्णयः बिना छलफल विधेयक अगाडी नबढाउन आग्रह
अस्पतालका ९ जना नर्सले एकैपटक बच्चा जन्माए !